WINDOWS 10 ကိုအစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားခြင်း - ဆောင်းပါးများ - 2019
27.06.2018 ပြတင်းပေါက် | အရင်ကဆိုရင်များအတွက် | အစီအစဉ်များ
အဖြစ်မကြာမီအပေါငျးတို့သ control panel ကိုမှန်ကန်စွာ Apps ကပက Windows 10 ကွန်ပျူတာကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်၏ဤအစိတ်အပိုင်းသို့ get အဖြစ်အစီအစဉ်များကို Windows 10 ၏ installation နဲ့ဖယ်ရှားရေး၏တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. အရင်ကဆိုရင်သတင်းအချက်အလက်, အဘို့ဤလက်စွဲစာအုပ်၌တည်၏။
အဆိုပါ OS ကိုအရင်ဗားရှင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့, အများကြီးမဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ် (သို့သော် Uninstall အ interface ကိုတစ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုထည့်ပြီး) ဟာ 10-ke အတွက်စွန့်ပစ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပေါ်, ထိုမှတပါး, ကတစ်ဦးအပိုဆောင်း, ပိုမြန် "Programs ကို Add သို့မဟုတ် Remove" ကိုသွားကြဖို့လမ်းနှင့်ပြေးရှိပါတယ် built-in ဖယ်ရှားမှုကို။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာတို့ကို။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်: ဘယ်လိုဇာတိ Windows 10 ကိုလျှောက်လွှာကိုဖယ်ရှားကြဘူး။
Windows 10 ကိုအတွက်အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်သည်အဘယ်မှာရှိ
Windows 10 ကိုအတွက် Control Panel ထဲကကိုပိုမိုတိကျစွာ "Add သို့မဟုတ် Remove Programs ကို" သို့မဟုတ် "Programs ကိုများနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" အဖြစ်ရှေ့တော်၌ထိုတခုတည်းသောအရပ်၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါ Control Panel ကို (ဒီအဘို့အသင် taskbar ပေါ်မှာရှာဖွေရေးအတွက် "control panel ကို" ရိုက်ထည့်ရန်စတင်, ပြီးတော့သင်ပိုမိုနည်းလမ်းတွေက Windows 10 control panel ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို :. ချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည်) ကိုဖွင့်။
ညာဘက်ထိပ်ပေါ်လျှင် "View" ကို "Programs ကို" က "program တစ်ခု Uninstall" ဖွင့်တွင် "အမျိုးအစား" ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
လယ်ပြင် "icon များ" ကြည့်ရှုရန်သတ်မှတ်လျှင်, သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးအစီအစဉ်များများ၏စာရင်းကိုရယူသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပစ္စည်း "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" ဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်များအချို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရုံစာရင်းထဲတွင်ပါက select လုပ်ပါနှင့်ထိပ်လိုင်းပေါ်တွင် "ဖျက်ပစ်ပါ" ကိုနှိပ်ပါနိုင်ရန်အတွက်။
လိုအပ်သောခြေလှမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမျးညှနျပါမညျသောဆော့ဖ်ဝဲရေးသူကနေမစတင် Denistallyator ။ အများအားဖြင့်, ရိုးရိုးဆော့ဖ်ဝဲ uninstall လုပ်ဖို့ Next ကိုကလစ်လုပ်ပါ။
အရေးကြီးမှတ်ချက်: Windows ကို 10 အကျင့်ကိုကျင့်အလွန်ကောင်းစွာ taskbar ၏ရှာဖွေ, ဤသို့မဟုတ်စနစ်အတွက်ဒြပ်စင်ရုံသင်ကတွေ့လိမ့်မည်အများစုဖွယ်ရှိ, ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌၎င်း၏အမည်ကိုရိုက်ထည့် start ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ရုတ်တရက်မသိရပါဘူးလျှင်။
က "Settings" ကိုကို Windows 10 မှတဆင့် Programs ကို Remove
"Settings" ကို - သစ်ကိုလျှောက်လွှာများ၏ parameters တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အ control panel ထဲကအပြင်အသစ် operating system ကို, ကို "Start ကို" ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် run နိုင်သည့် "Options ကို" ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုသူများထဲတွင်ပါကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးအစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သင်ကခွင့်ပြုပါတယ်။
Windows 10 ကို setting များကို အသုံးပြု. program တစ်ခုသို့မဟုတ် application ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
က "Settings" ကိုဖွင့်ပါနှင့် "Applications ကို" ကိုသွား - "Applications ကိုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ" ။
စာရင်းထဲကသင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခလုတ် delete နဲ့နှိပ်ချင်သော program ကိုရွေးချယ်ပါ။
တစ်ဦးက Windows 10 လျှောက်လွှာစတိုးဆိုင်ဖျက်ပစ်လျှင်, သင်ရုံကိုပယ်ဖျက်အတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဂန္အစီအစဉ် (desktop application ကို) ကိုဖျက်ပစ်ပါကယင်း၏အရာရှိတဦးကဖယ်ရှားမှုကိုဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Windows 10 ကိုကွန်ပျူတာထဲကနေအစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းကို interface ဗားရှင်းအသစ်အတော်လေးရိုးရှင်းအဆင်ပြေပြေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Windows 10 ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်3နည်းလမ်းများ - ဗီဒီယို
သည် "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" ဖွင့်ဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု
ဒါကြောင့်တစ်ဦးအပိုင်းကိုဖွင့ဒါမှမဟုတ် "Applications ကိုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ" တွင် Programs ကို Remove မှကတိထားရာသစ်တစ်ခုအမြန်လမ်းကို Windows 10. ပင်ပထမဦးဆုံးအပိုင်းဘောင်အတွင်းဖွင့်လှစ်, ချက်ခြင်းဖြစ်စေဒုတိယ Control Panel ထဲက Program ကိုသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ် "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" ဖယ်ရှားပစ်ရန်စတင်သည်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ် settings :
က "Start ကို" ခလုတ်ကို (သို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်း Win + X ကို) ပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီးထိပ်ပိုင်းက menu item တခုကိုရွေးချယ်ခြင်း။
ကိုယ့်ကို "Start ကို" menu ကိုဖွင့်လှစ်, (Windows 10 ကို app store ကို မှလွဲ. ) မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုပေါ်မှာ right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ဖျက်ပစ်ပါ။ "
အတော်များများက install လုပ်ပြီးအစီအစဉ်များကို run ဖို့ဖြတ်လမ်းအပြင်, uninstall လုပ်ဖို့တစ်ဖြတ်လမ်းလည်းဖြစ်ပါသည်, သောဖိုင်တွဲ Start က "အားလုံး Applications ကို" မီနူးထဲမှာဖန်တီးပါ။ ဒါ့အပြင်သငျသညျအများအားဖြင့်ကိုယ့်ဖိုင်ကိုစတင်ဖျက်ပစ်, အ program နဲ့ဖိုင်တွဲထဲမှာ (တစ်ခါတစ်ရံနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဥပမာ uninst.exe, etc, အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်) ကို uninstall.exe file ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Windows 10 ကိုတစ်ဦးထံမှလျှောက်လွှာဖယ်ရှားပစ်ရန်, သင်ရုံ, အိမ် screen ပေါ်မှာမိမိအ tile ကိုအပေါ်ကို Start menu ကိုသို့မဟုတ် application ကိုစာရင်းထဲမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ် "ဖျက်ပစ်ပါ။ "
ထိုကဲ့သို့သော Anti-virus software ကိုအဖြစ်အချို့သောပရိုဂရမ်၏ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူတစ်ခါတစ်ရံစံပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နဲ့ (သင့်ကွန်ပျူတာကနေ Antivirus ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို။ ကြည့်ပါ) တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်အထူးကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ဖယ်ရှားပေးမှု, သင်ဆောင်းပါးအတွက်အစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကိုဖတ်ရှုနိုင်သည့် - သင်ဖယ်ရှားသည့်အခါဒါ့အပြင်ကွန်ပျူတာ၏တစ်ဦးထက်ပိုပြည့်စုံသန့်ရှင်းရေးအတှကျအတျောမြားမြားကိုအထူး tools တွေကိုသုံးပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသငျသညျကို Windows 10 မှာ delete ချင်သော program ကိုဖွင့် applications များစာရင်းထဲမှာမပါ, ဒါပေမယ့်သူကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါဆိုလိုပေမည်:
ဤသည်ခရီးဆောင်-အစီအစဉ်ဆိုလိုသည်မှာ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတပ်ဆင်မလိုအပ်ရုံမျှမ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတူပြေး, သင်ပုံမှန်ဖိုင်အဖြစ်ကဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်မထားဘူး။
တစ်ဦးကအန္တရာယ်ရှိတဲ့သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။ တစ်ဦးသံသယရှိလျှင်ပစ္စည်းထိပ်တန်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖယ်ရှားရေး Tool ကိုရည်ညွှန်း။
ငါပစ္စည်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကနှင့် - မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမေးဖို့ကျွန်မဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
လျှောက်လွှာ Installing Android ကိုမှသော့ခတ်ထားပါသည် - ဘာလုပ်ရမှန်း?
Android ပေါ်မှာဖုန်းကို flash
ဗီဒီယို Watch: Best Upcoming Windows 10 Features in 2019 (နိုဝင်ဘာလ 2019).